Pressfarm: Tsvaga Vanyori venhau Kuti Vanyore Nezve Kutanga Kwako | Martech Zone
Chipiri, July 15, 2014 Douglas Karr
Dzimwe nguva, isu tinowana pre-mari, pre-Investment kutanga vanotikumbira rubatsiro rwekushambadzira uye hapana chaicho chatingaite sezvo vasina bhajeti. Isu tinowanzovapa mamwe mazano anove nekukurudzira kushambadzira kweshoko-remuromo (aka mareferenzi) kana kutora mari shoma yavanayo uye kuwana rakakura hukama hweveruzhinji hwakasimba. Sezvo zvemukati uye zvemukati zvekushambadzira zvinoda kutsvagisa, kuronga, kuyedza uye nekumhanyisa - zvinotora nguva yakawandisa uye zvinoda kune zviwanikwa zvakawanda zvekutanga.
Takanyora kare kare how to pitch uye sei kwete kukanda blogger kana mutori wenhau. Kunyora inoenderana, inotsanangudza posvo kumutori venhau inzira yakanaka yekuyedza kuita kuti kutanga kwako kuzivikanwe. Vamwe vanhu vanotenda kuti izvi zvinongova SpAM asi hazvisi. Seye yekushambadzira tekinoroji blogger, ini ndinotarisira, kuda uye kushandisa mapango zuva rega rega kuti uwane zvigadzirwa zvitsva nemasevhisi ekunyora nezvazvo pane ino blog. Chinokosha ndechekuti dhizaini inogadzirwa sei uye kuti inoenderana here nevateereri vangu.
Pressfarm inguva nyowani yekutanga saiti iyo yakaunganidza email uye twitter maakaunzi evatapi venhau mukati meInternet iyo inonyora nezve kutanga. Zvakanakisisa pane zvese, haisi kunyoreswa kunodhura. Ingori madhora mashoma ekuwana runyorwa rwese rwevatapi venhau.
Zano rangu rekutanga - dhizaina meseji kune yega yezvinyorwa zvaunoshuvira kuwana. Zvichengete zvinyoronyoro uye kusvika padanho, usanyengerere kuti ndiwe unotevera chinhu chikuru, tumira mashoma mapikicha emubatanidzwa kune vhidhiyo kuti vatarise ... uye wozomirira. Ndokumbirawo usaramba uchinyora uchidzokorora… izvo zvinongotsamwisa. Kana ivo vaida kunyora nezvako, ivo vaizove kekutanga nguva iwe kuvabata.
Tags: blogger bioblogger panitsvaga blogger pa twittertsvaga vatori venhau pa twittermutori wenhau biomutori wenhaupitchmuchinatangavatapi venhau vekutangakutanga kushambadzirakutanga mabhuku
Dambudziko reKushambadzira Silos uye Maitiro Ekutyora